Saddexda xul ee ilaa iyo haatan xaqiijiyey inay iska xaadiriyeen wareegga 16-ka tartanka Euro 2020 – Gool FM
(Yurub) 18 Juun 2021. Koobka qarammada qaaradda Yurub ee Euro 2020 ayaa meel xiiso leh maraya xulalka ayaana tartan ugu jira sidii ay ugu soo bixi lahaayeen wareegga bugbaxa ee tartankan.
Haddaba illaa iyo haatan kaliya saddex xul ayaa iska xaadiriyey wareegga 16-ka tartanka Euro 2020 oo sanadkan wata magiciisii hore ee 2020, maadaama uu dib u dhacay oo sanadkan 2021 la ciyaarayo.
Xulka qaranka Talyaaniga ayaa noqday xulkii ugu horreeyey ee iska xaadiriya wareegga 16-ka Euro 2020, waxaana ay adkaadeen labadii kulan ee ugu horreysay oo ay ciyaareen tartanka sanadkan iyadoo xitaa aan gool laga dhalin.
Xulka qaranka Belgium ayaa noqday xulkii labaad ee u soo gudba wareegga 16-ka Euro 2020, waxaana ay ka soo baxeen guruubkooda B kaddib markii ay xalay 2-1 kaga adkaadeen xulka Denmark oo isaga haray tartankan.
Dhinaca kale xulka Netherlands ayaa k soo baxay Guruubka C iyadoo hal ciyaar ahi u harsan tahay, waxaanay leeyihiin lix dhibcood, iyagoo noqday xulkii saddexaad ee u soo baxa wareegga 16-ka Euro 2020 iyo xulkii ugu dambeeyey ee bugbaxa tartankan iska xaadiriya.
Si kastaba ha noqotee, maalmaha soo aaddan ayaa la filayaa in xulal kale ay ka soo baxaan heerka guruubyada tartankan oo ay xulalka Talyaaniga, Belgium iyo Holland kula biiraan wareegga 16-ka Euro 2020.